Votsotra i Loujain al-Hathloul, ilay Saodiàna vavy mpikatroka, ary nibitsika · Global Voices teny Malagasy
Mbola voafehifehy tsy mahazo mivezivezy sy miseho imasom-bahoaka izy
Voadika ny 19 Febroary 2021 2:39 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, Ελληνικά, русский, Português, Español, Nederlands, English
Loujain, izay nalaina an-kery avy any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny May 2018, nampijaliana, tsy navela notsidihan'ny fianakaviana, ary natokana toerana naharitra fotoana maro nandritra ny namonjàna azy, dia nomelohina hifonja mandritra ny enina taona tamin'ny 28 Desambra 2020, didy navoakan'ilay fitsarana malaza ratsy misahana ny asa fampihorohoroana ao amin'ny fanjakàna. Ilay fetran-taona enina, izay ny antsasany nataon'ilay didy ho sazy mihantona, dia nihena raha oharina amin'ny fanamelohana faratampony 20 taona am-ponja izay notakian'ny fampanoavana tamin'ny 17 Desambra.
Ny gazety ao an-toerana, raha nitanisa ilay fanapahankevitry ny fitsaràna, nilaza fa i Loujain, 31 taona, dia voaheloka ho “nanao heloka bevava voararan'ny andininy faha-43 ao amin'ny Lalàna miady amin'ny Asa Fampihorohoroana“, isan'izany ny fiarahana miasa amina hery vahiny mpanozongozona, sy ny fampiasàna ny aterineto ho fanohanana fandaharam-potoana iray avy any ivelany ho ao anatin'ny fanjakàna, ka tanjona amin'izany ny hanohintohinana ny filaminam-bahoaka.
Thank you again for the support ??❤ https://t.co/R56nrvur03
Misaotra an'i @POTUS! Tsy manana fahalalahana ny rahavavaiko, raràna izy tsy hahazo mivahiny any ivelany, toy izany koa ny fianakaviany. Mbola mitohy ny fitsaràna azy.
Ilay famotsorana malaza azon'i Loujain dia iray amin'ireo fivoarana miabo marobe amin'ny rafitry ny lalàna manoloana ireo mpikatroka sy gadra noho ny resaka pôlitika ao Arabia Saodita, izay ny sasany nafahana ary ny hafa nomena fanalefahan-tsazy.
Ny namotsorana ilay mpikatroka malaza dia mandrisika ihany koa ny fitakiana hamotsorana ireo hafa nogadraina noho ny resaka fanehoana hevitra, izay mbola mihiboka any anatin'ireo fonja saodiàna.
Ok, MBS, fotoana izao tokony hodian'i Abdulrahman an-trano, ampy izay, tena ampy @AreejASadhan https://t.co/m045NSCPWo